11 Afei bere a wɔrebɛn Yerusalem, Betfage ne Betania+ wɔ Ngo Bepɔw no so no, ɔsomaa n’asuafo no mu baanu+ 2 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ akuraa a muhu yi ase, na sɛ munya hyɛn mu pɛ a mubehu afurum ba bi a wɔamantam no a onipa biara ntenaa no so da; monsan no mfa no mmra.+ 3 Na sɛ obi bisa mo sɛ, ‘Dɛn nti na moreyɛ eyi?’ a, monka sɛ, ‘Awurade hia no, na ntɛm ara ɔbɛma mode no aba ha.’”+ 4 Enti wɔkɔ kohuu afurum ba no wɔ abɔnten sɛ wɔamantam no wɔ pon ano, wɔ ɔkwan ho, na wɔsan no.+ 5 Na wɔn a wogyinagyina hɔ no bi bisaa wɔn sɛ: “Moresan afurum ba no ayɛ dɛn?”+ 6 Wɔkaa nea Yesu kae no pɛpɛɛpɛ kyerɛɛ wɔn; na wɔma wɔkɔe.+ 7 Na wɔde afurum+ ba no brɛɛ Yesu, na wɔde wɔn ntade nguguso guu no so, na ɔtenaa so.+ 8 Afei nso, nnipa bebree de wɔn ntade+ nguguso sesɛw kwan mu, na ebinom nso twitwaa nnua mmaa+ fii wuram.+ 9 Na wɔn a wodi anim ne wɔn a wɔwɔ akyi no kɔɔ so teɛteɛɛm sɛ: “Yɛsrɛ wo, gye no!+ Nhyira ne nea ɔba Yehowa din mu!+ 10 Nhyira ne yɛn agya Dawid+ ahenni a ɛreba no! Yɛsrɛ wo, gye no, wo a wowɔ ɔsorosoro nohoa!” 11 Na okoduu Yerusalem, na ɔkɔɔ asɔrefie hɔ; na ɔhwɛɛ nneɛma nyinaa hyiae, na esiane sɛ na bere kɔ dedaw nti ofii hɔ ne dumien no kɔɔ Betania.+ 12 Ade kyee a wofii Betania no, ɔkɔm dee no.+ 13 Na n’ani bɔɔ borɔdɔma dua bi a ahaban wɔ so so wɔ akyirikyiri, na ɔkɔhwɛe sɛ ebia obenya biribi wɔ so a. Nanso bere a ɔkɔɔ ho no wanhu hwee sɛ ahaban, efisɛ na ɛnyɛ bere a borɔdɔma sow.+ 14 Enti ɔka kyerɛɛ dua no sɛ: “Obiara renni wo so aba bio da.”+ Ná n’asuafo no retie. 15 Afei wɔbaa Yerusalem. Ɛnna ɔkɔɔ asɔrefie hɔ, na ofii ase pam wɔn a wɔretɔn nneɛma ne wɔn a wɔretɔ ade no fii asɔrefie hɔ, na ɔkekaa sikasesafo no apon ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no nkongua butubutuwii;+ 16 na wamma obiara ansoa ade antwam amfa asɔrefie hɔ, 17 na ɔkɔɔ so kyerɛkyerɛe, kae sɛ: “Wɔnkyerɛwee sɛ, ‘Wɔbɛfrɛ me fie amanaman nyinaa+ mpaebɔ fie+ anaa’? Nanso mode ayɛ adwowtwafo atɛwee.”+ 18 Na asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no tee, na wofii ase hwehwɛɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akum no,+ na na wosuro no, efisɛ na ne nkyerɛkyerɛ no ma nnipakuw no ho dwiriw wɔn daa.+ 19 Na eduu anwummere no, wofii kurow no mu sɛnea wɔtaa yɛ no. 20 Na anɔpatutuutu a wɔretwam no, wohui sɛ borɔdɔma dua no awu dedaw fi ne ntini ase.+ 21 Enti Petro kaee, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Rabi, hwɛ! borɔdɔma dua a wodomee no no awu.”+ 22 Na Yesu bua see wɔn sɛ: “Munnya Onyankopɔn mu gyidi. 23 Nokwarem mise mo sɛ obiara a ɔka kyerɛ bepɔw yi sɛ, ‘Tutu kɔhwe po mu,’ a onnye kyim ne komam na mmom ɔwɔ gyidi sɛ nea ɔka no bɛba mu no, ɛbɛyɛ hɔ ama no.+ 24 Eyi nti na meka kyerɛ mo sɛ, ade biara a mobɔ ho mpae na mubisa no, munnya gyidi sɛ mo nsa aka awie, na mubenya.+ 25 Na sɛ mosɔre gyina hɔ sɛ morebɔ mpae a, momfa biribiara a obiara ayɛ mo nkyɛ no;+ na mo Agya a ɔwɔ soro no nso de mo mfomso afiri mo.”+ 26 —— 27 Na wɔsan baa Yerusalem. Na bere a ɔnam asɔrefie hɔ no, asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no baa ne nkyɛn+ 28 na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Tumi bɛn na wode yɛ eyinom? anaasɛ hena na ɔmaa wo saa tumi a wode yɛ eyinom yi?”+ 29 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mebisa mo asɛm biako. Momma me mmuae, na me nso mɛka tumi ko a mede yɛ eyinom akyerɛ mo.+ 30 Tumi a Yohane de bɔɔ asu+ no fi soro anaasɛ efi nnipa? Momma me mmuae.”+ 31 Ɛnna wofii ase susuw ho sɛ: “Sɛ yɛka sɛ, ‘Efi soro a,’ ɔbɛka sɛ, ‘Ɛnde adɛn nti na moannye no anni?’+ 32 Nanso yɛyɛ dɛn ka sɛ, ‘Efi nnipa’?”— Ná wosuro nnipadɔm no, efisɛ wɔn nyinaa bu Yohane sɛ na ɔyɛ odiyifo ankasa.+ 33 Enti wobuaa Yesu kae sɛ: “Yennim.” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde me nso merenka tumi a mede yɛ eyinom nkyerɛ mo.”+